Ataovy automatique ny fanandramana sy ny fanatsarana ny fampiharana findainao amin'ny tehaka | Martech Zone
Fitsapana mandeha ho azy avy amin'ny tehaka dia tolotra serivisy feno izay miantoka ny fampiharana ny findainao sy ny tranokalanao tsy miovaova hatrany amin'ny fananganana iray mankany amin'ny manaraka. Matetika aho miteny amin'ny olona fa raha mamolavola na mamorona zavatra ianao ary mangataka valiny, dia tena hahazo valiny tsy ilaina ianao izay tsy mahay mandanjalanja na be isa. Ny fangatahana valiny amin'ny olona dia mitovy amin'ny fanontanianao hoe: "Afaka mahita zavatra tsy mety ve ianao amin'izany?" ary ny fanandramana ataon'ny mpampiasa dia miainga amin'ny fampiasana mahazatra hatramin'ny fitadiavana lesoka fotsiny.
Ny fahazoana sehatra iray ahafahanao mizaha toetra ny fampiharana anao mba hahazoana tamberina tsara dia hamindra ny sehatrao amin'ny làlana tsara, hanatsara ny fananganana, ary hampihena ny vidin'ny marketing sy ny fampandrosoana. Applause manana ebook mahafinaritra, Fomba 5 handresena amin'ny Mobile Automation izay manome tsipiriany momba ny fetrany sy ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny automatisie fanandramana fampiharana finday - aza hadino ny misintona azy.
Mobile App Test Automation avy amin'ny tehaka
Ny fitiliana fanandramana tehaka dia misy:
Rindrambaiko fanaingoana ny tehaka - naorin'ireo injeniera mandeha ho azy manam-pahaizana ary miorina amin'ny fiteny sy fitaovana enti-mitarika indostrialy. Nahazo traikefa nandritra ny taona maro ny traikefa, ny rafitra dia manatsara ny fitsapana ny fampiharana anao ary mitazona azy ireo handeha amin'ny fitambarana Web, iOS, ary Android.
Tehaka fanandramana manerantany - injeniera mandeha ho azy manam-pahaizana manana traikefa an-taonany maro miasa amin'ireo orinasa lehibe indrindra manerantany. Ny mpanjifa mandeha ho azy dia tendrena ekipa natokana hiantohana ny fahombiazanao mitantana ny rafitra, ny fitaovana ary ny fampidirana, manoratra tranga sy script, ary manara-maso ny fizotran'ny fitsapana rehetra. Mipetraha ary miala sasatra eo am-panaraha-maso ny fahasalaman'ny fampiharana anao.
Dashboard mandeha ho azy - Fahitana eo noho eo ny fahasalaman'ny fanamboarana ankehitriny sy taloha. Firy ny bibikely hitantsika, firy isan-jaton'ny fitsapana natao no mihatsara na miharatsy? Sokafy ny dashboard ary fantaro.
Tags: tehakaautomatique app mobilefitsapana ny fampiharana findayscript fitsapana ny fampiharana findayfitsapana ny fampiharana findaytabilao fanandramana
2 Jul 2015 amin'ny 3:06 PM
Raha resaka marketing amin'ny finday no resahina, ny mandeha ho azy no tena ilaina. Tsy azonao antenaina ny olona hifanerasera aminao amin'ny alàlan'ny fitaovana finday raha tsy mandefa fampahalalana mahafeno fepetra sy manokana ianao. Tena mieritreritra aho fa hahita fitsapana automatique bebe kokoa isika atsy ho atsy, tsara izany!